» ए’मसीसी मुलुकको लागि अत्यन्तै जरुरी छ : सरकारका प्रवक्ता कार्की ,,,,, ता’ली या गा’ली? ए’मसीसी मुलुकको लागि अत्यन्तै जरुरी छ : सरकारका प्रवक्ता कार्की ,,,,, ता’ली या गा’ली? – हाम्रो खबर
ए’मसीसी मुलुकको लागि अत्यन्तै जरुरी छ : सरकारका प्रवक्ता कार्की ,,,,, ता’ली या गा’ली?
काठमाडौं ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहा’दुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना मुलुकलाई जरुरी रहेको बताएका छन्। एमसीसी एक विकास परियोजना भएकाले उनले देशको लागि सो परियोजनाको आवश्य’कता भएको बताउँदै सो सम्बन्धमा दलहरुबीच छलफल गरेर मात्र पारित गरिने ब’ताएका हुन्
सुनसरीको रामधुनी नगरपालि’काको का’र्यक्रमका लागि विराटनगर पुगेका उनले सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै आवश्य’कता र बाध्यताले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको समेत बताए। उनले आगामी संसद अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुने जानकारी गराए।
सञ्चारकर्मीहरुले रा’खेको जिज्ञासामा कार्कीले वर्तमान मन्त्रिमण्डलले चाँडै पूर्णता पाउने पनि बताए। त्यस निम्ति गठबन्धन दलबाहेक अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ। – यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यो पनि,,,पा’त पहेँलिएर ख’स्दैमा रु’ख ढ’ल्दैन : ओली,,काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओलीले एमालेबाट छुट्टिएका माधवकुमार नेपाललाई पहेंलिएका ‘पात’को संज्ञा दिँदै रुख नढल्ने बताएका छन्।शनिबार ललितपुरमा युवा संघद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई पहेँलिएको पातको संज्ञा दिँदै एमाले रुख भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘एक दुईव’टा पात पहेँ’लिएर खस्दैै रुख ढल्दैन । झ्न नयाँ नयाँ पालुवा पलाउँदै जान्छन्न । हाँगा पलाउँदैछन् ।’रुखबाट पातहरू खस्दैमा पीर माने बस्न पनि नहुने उनको भनाइ थियो । पातहरु खस्दा झन् म’जबुत हाँगाहरू पलाउने उनले बताए ।
एमाले सिध्याउन लागि परेका नेपा’ललाई पटक पटक सम्झाउँदा पनि केही सीप नलागेको उनले बताए । उनले भने, ‘एमालेलाई सिध्याउँछु, देशलाई अफ्ठ्या’रो पार्छु भनेर लागेपछि। विदेशी दलालीसँग कसम खाएर लागेपछि सम्झाएर हुन्छ ? पार लाग्दैन। सम्झाउन खोजेँ पार लागेन ।’नेपाललाई पाँच÷पाँच पटक भेटेर सम्झाएको तर, सम्झाउन नसकेको उनले बताए ।
अब, यसमा कसैले चि’न्ता गरेर बस्न नहुने प’नि बताए।साथै, नेपालले मोर्चा कसेर एमा’लेविरुद्ध लडे पनि नसक्ने पनि उनले बताएका छन् । उनले भने, एमालेविरूद्ध मोर्चा बनाउँछन् रे। मिलेर लड्ने हो रे। माधव नेपालका नक्कली नाम, दोहोरिएका नाम जोड्दा ५५ र २९ जना मिलेर एमालेसँग लड्ने रे, कुरामा उहाँहरू लड्नुहुन्छ। मैदानमा व्यवहारमा होइन।’